Lifestyle Archives ⋆ Lovely Myanmar
ပညာရှင်များရဲ့ မြောက်များစွာသော အထူးကုလေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ အသစ်သစ်သော ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်….။ ထိုအရာကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းရောဂါကို တားဆီးနိုင်ပြီး၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါလက္ခဏာများကိုလည်း ကုသပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်…။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါအတွက် လက်ရှိ ကုသမှုဆိုင်ရာတွေကို လူနေမှုပုံစံထဲ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် မကြာခဏ ဆိုသလို ပျက်ကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်….။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ခိုင်မာသော သက်သေခံ အထောက်အထားတွေကတော့ ရှိနေစမြဲဖြစ်ပါတယ်….။ သိပ္ပံနည်းအရသက်သေခံ အထောက်အထားတွေကကော အကြုံပြုခဲ့တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်လှုပ်ရှားမှုတွေက စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ် တိုက်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်….။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ “သန်း ၄၀” ကို တစ်နှစ်ချင်းစီ စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်ရာတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့…၊ “Anxiety and Depression Association of America” ရဲ့အဆိုရ သိရှိခဲ့ရပါတယ်…..။ …
စုံတွဲတွေမှာ အမြဲတမ်း ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နှစ်ဦးသား တရားဝင် အိမ်ထောင်ပြု လက်ထပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ချက်ချင်း ကလေးယူမလား ၊ အချိန်တစ်ခုကြာမှ ကလေးယူမလားဆိုတာပါပဲ။ ဒီကိစ္စဟာ စုံတွဲတွေအကြား အမြဲအငြင်းပွားရလေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူပြီး အဆင်ပြေကြတဲ့ စုံတွဲတွေ ရှိပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်း ဘယ်အချိန်ဟာ ကလေးယူဖို့ အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သိထာခြင်းက အကောင်းဆုံးပါ။ လန်ဒန်မြို့က သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ ဒီအရာအတွက် အဖြေတစ်ခုကို ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အဖြေတစ်ခုကို တိတိကျကျ ရရှိခဲ့ပါပြီ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ အသက်၃၀ကျော်မှ ကလေးယူခြင်းဟာ မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးငယ်ကို ပြီးပြည့်စုံပြီး ထူးချွန်တဲ့ ပါရမီရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ အဖြေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ သုတေသနပညာရှင်များက မိခင်အသက် ၃၀ကျော်မှ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ အသက်၂၀ကျော်အရွယ်မှာတင် မွေးဖွားလိုက်တဲ့ …
တက်တူးဟာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရေပြားပေါ်က ဖက်ရှင်ဖြစ်လာပါပြီ။ တက်တူးထိုးတာဟာ တစ်ဘဝလုံး သေရာပါမယ့် အမှတ်အသားတစ်ခုကို ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တင်လိုက်တာဖြစ်လို့ တက်တူးထိုးမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ထိုးသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တက်တူးထိုးမယ်ဆိုရင် အခုပြောမယ့် အချက် ၅ ချက်ကို ကြိုပြီးတွေးထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ (၁) ဈေးကြီးနိုင်တယ်။ ပွဲဈေးတန်းသွားပြီး တွေ့ရာ Tattoo Artist နဲ့ထိုးရင် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာပေါင်းစုံကို ရှင်းဖို့ပါ ခေါင်းကိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ တက်တူးတွေကို တကယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တက်တူးပညာရှင်နဲ့ထိုး မယ်ဆိုရင် အရွယ်အစား၊ သုံးမယ့်ဆေးမှင်နဲ့ လက်ခအလိုက် ဈေးအစားစားရှိပါတယ်။ တစ်ခါထိုးပြီး တစ်သက်လုံးကြည့်ဖို့အတွက် တန်ဖိုးကြီးပေးမလား မပေးဘူးလားဆိုတာ အရင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ (၂) ဆိုင်အရင်သွားကြည့်ပါ။ တက်တူးမထိုးခင် စဉ်းစားရမှာက ဘယ်ဆိုင်မှာထိုးမှာလဲဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်အနေနဲ့ တက်တူးဆိုင်ရွေပြီးပြီဆိုရင် ဆိုင်ကို …
မိန်းမရဲတောင်ရဲ့အလှ အပကိုစိတ်ဝင်စားလို့သွားကြဘုရားဖူးကြFacebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့နေရပေမယ့် အဲဒီတောင်ရဲ့ သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား . ကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး ဘုရင့် သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့ အချစ်ဆိုတာက ဆန်းကျယ်တယ်လေ သူချစ်မိတာက ကျေးတောသား ကုမ္မာရ တဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကိုဘုရင့် ရွေနားတော်ပေါက်ကြား အမျက်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်လား မဲရိုးက ဟင်းအိုးကိုမှအားမနာ ကျေးတောသား ကုမ္မာရ လူငနွားကို သတ်စေတဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ဒီသတင်း နန်းဧကရီမွှေးကြားတော့ ရင်ဝကို ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ အထုခံရသလို ထင်ပါရဲ့ချစ်သူမောင်ကို စိတ်ပူ နန်းတော်က …
“အပူထုတ် ရေချိုးနည်း” လူတွေမှာ ငုပ်လှောင်အောင်းတဲ့ အပူတွေရှိပါတယ်။ ဒီအပူတွေကို ရေချိုးပြီးမထုတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အောင်းပူတွေကို စံနစ်တကျမထုတ်ဘဲ ကန်ထွက်စေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေချိုးနည်း မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ လူတိုင်းအတွက် အောင်းပူတွေ ထွက်စေမယ့် ( အနှိပ်မခံဘဲ ) အပူထုတ်တဲ့နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်။ ၁ = ရေမချိုးခင် အပူထုတ်နည်း – မန်ကျည်းရေ ခပ်ကျဲကျဲ ခပ်ပါးပါးလေး ခန္တာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ပွတ်ပါ။ ၂ = ဆားနည်းနည်းဖြင့် ဘယ်ခြေဖဝါးကို ညာလက်ဖဝါးနဲ့၊ ညာခြေဖဝါးကို ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးနဲ့ အလျားလိုက် အကြိမ် ၅၀ – ခန့် ပွတ်ပါ။ ၃ = ၁၀ – မိနစ်ကြာမှ ရေချိုးပါ။ …
အငယ်တွေလုံးဝနားမလည်ပဲ အကြီးတွေသာနားလည်ခံစားနိုင်မယ့် ပုံရိပ်များ
သင်တို့အနေနဲ့ ဘဝမှာ မိဘတွေဆီက အချစ်တွေကို သိမ်းကြုံးပြီး ရချင်ခဲ့ကြဖူးတယ်မလား။ ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ နားလည်လာပေမယ့်လည်း ငယ်စဉ်အခါမှာတော့ ကိုယ့်တယောက်ထဲကို မိဘတွေ ချစ်တာ အလိုလိုက်တာ လိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးတာကို လိုချင်ကြတယ် ထင်ပါတယ်။ ကလေးတော်တော်များများဟာ သူတို့ထက်ငယ်တဲ့ ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေ ရလာပြီဆိုရင်တော့ ရုတ်တရတ် ပျော်လည်းပျော်ကြသလို သူတို့အပေါ် မိဘတွေထားတဲ့ အချစ်တွေကို သူတို့ရဲ့ အငယ်တွေဆီရောက်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောချင်လွန်းလို့ပေ့ခ်ျက ဒီတခေါက် ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ အကြီးတွေသာနားလည်ခံစားနိုင်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁.ဒီကလေးကတော့ နောက်ထပ်ကလေးတယောက် ရလာတာကိုသိပ်ပြီးတော့ မလိုလားဘူးဆိုတာကို သိသာနေပါတယ်။ လောကထဲဝင်လာတဲ့ ကလေးလေးတွေကို ဆီးကြိုလိုက်တာကတော့ ညင်ညင်သာသာလေးပါပဲ။ ၂.လောကထဲရောက်လာတဲ့ သူ့နဲ့ ညီအစ်ကိုတော်ရမယ့်သူလေးကိုတော့ ကိုင်တောင်မကိုင်ချင်ရှာဘူး ထင်ပါတယ်။ သူ့လက်ထဲရောက်လာတာကို တော်တော်လေး စိတ်ပျက်နေရှာပုံပါပဲ။ ၃.ဗိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကလေးလေးအတွက် အဖေနဲ့ …
Zawgyi ၁။ သွေးတိုးလို့သွေးကျလိုလျှင် သံပုရာသီးတစ်လုံးကို ၁၅ မိနစ်ခန့် ကြာအောင်ရေစိမ်ပြီး အရည်ညှစ်၍ ကြက်ဥတစ်လုံး ဖောက်ထည့်ကာ ရောမွှေ သောက်လိုက်ပါ။ သွေးကျဆေး အထူးသောက်စရာ မလိုဘဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၂။ အပူကျိတ်ဖြစ်ရင် ပါးချိတ်အောက်နှင့် ပေါင်ကြားတို့ တွင် ပေါက်တက်သော အပူကျိတ်များကိုပျောက်လိုလျှင် နနွင်းခါးဥကို သွေးလိမ်းပါ။ သုံးကြိမ်မျှ လူးရုံ လိမ်းရုံနှင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၃။ အိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်လျှင် ဒန့် ကျွဲမြစ်ကိုပြုတ်၍သကြားအနည်းငယ် ထည့်ပြီးသောက်ပါ။တစ်ခါသောက်လျှင် အကြမ်းပန်းကန်နှင့်တစ်လုံးသောက် ည ၊ နံနက် သောက်ပါ။ အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်းစေမည်။ ၄။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဖြစ်လျှင်​ ကစော့ပုပ်မြစ်ကိုအခြောက်လှန်း အမှုန့် ပြုပြီး ပျားရည်နှင့်သောက်ပါ။ ရက်မရှည်ဘဲ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ၅။ အမျိုးသမီးများမီးယပ်ဖြူဆင်းရောဂါဖြစ်လျှင်အဝေရာရွက်ကို မကြာခဏ သုပ်စားပါ။ ထို့ အပြင် …
ခင်ဗျားပိုက်ဆံ မဆပ်နိုင်ဘူးဗျာ ကြိုက်တဲ့နေရတိုင် ခင်ဗျားငွေချေးတာ ထောင်ထဲ ၅နှစ်ရောက်သွားမယ်
Zawgyi မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခညားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်သူကစလိုက်တယ်မသိ။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးသူတွေရဲ့ လက်သုံးစကား လက်နက် ကြီး ဖြစ်လို့။ ဒီတော့ ငွေရှင်ခမျာလည်း အတိုးလေးရလို့ ချေးမိတာ ။ အခုပြန်တောင်းတော့ တချိန်က မျက်နာ ငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဆီက ငွေချေးခဲ့တဲ့သူက အခုတော့ မျက်နာထားကြီးတင်းပြီး ကိုယ်ကပဲ သူဆီက ပြန်ချေးနေသလိုလို။ ဒီလိုတောင်းလို့မရရင် တရားစွဲတောင်းမယ်လို့ စိတ်ထဲက ပြင်ထားပေမယ့် တစ်ဖက်က အတိုးပါတဲ့အတွက် ထောင် ၅ နှစ် ချလို့ရ တယ်လို့ပြောလာတော့ စိတ်ထဲမှာ ချေးထားမိတဲ့ငွေ ကူညီပေးထားတဲ့ငွေလေး ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလား ဆိုပီး သောကအပူတွေဖြစ်။ အတိုးပါရင် ထောင် ၅ နှစ်ထိ ချလို့ရတယ်ဆိုတာ ဥပဒေ …
မွေးဖွားလာမယ့် ရင်သွေးငယ်လေး ချောမောလှပစေဖို့ မိခင်လောင်းတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်း မျှော်လင့်ထားကြတဲ့ အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မကြာခင် မွေးဖွားလာမယ့် မိမိရဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးကို ရုပ်ချောစေချင်တာပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် မိခင်နေထိုင်တဲ့ အခန်းမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကပ်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ကလေး ရုပ်ချောဖို့အတွက် ပုံတွေနံရံမှာကပ်တာထက် ပိုမိုသေချာမယ့် အချက်လေးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ တကယ်တော့ မိဘတွေရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ရင်သွေးငယ်ဟာ ဖခင်နဲ့မိခင်တို့ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးမှသာ ရရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့် ကလေးငယ်ရဲ့ ရုပ်ရည်ချောမောမှုဟာ မိဘတွေရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့လည်း အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် တခြား ဖန်တီးယူလို့ရမယ့် နည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အရက်သောက်တာ မကောင်းပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမျိုးမှာပေါ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ မိခင်လောင်းအရက်သောက်လိုက်တဲ့အခါ သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အများကြီး ဆိုးကျိုးတွေသက်ရောက်မှာပါ။ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ …
ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ
Zawgyi မနေ့ညက ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ 1. Fame ကထုတ်တဲ့ ဆီးကျောက်ပျော်ဆေး ၁ရက် ၄လုံး 2. Cital ဆိုတဲ့ဆေးရည်ကိုက ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ရေတဖန်ခွက်နဲ့ဖျော် မနက် ၁ ကြိမ် ည ၁ ကြိမ် (သူက ဆီးလမ်းကြောင်းကိုကျောက်ကျဖို့လွယ်ကူအောင် ရှင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်) 3. အေးချမ်းမေ ဆေးလက်ဖက်ခြောက်ကို တနေ့ ရေနွေးအဖြစ် ၃ လီတာ သောက်ပေးတယ်။ 4. spanil ဆိုတဲ့လိမ္မော်ရောင်ဆေးလုံးလေးတွေက အရမ်းအောင့်တယ်အချိန်သောက်ဖို့ ဆရာဝန်ညွှန်ထားတာပါ။(ဝယ်ပြီးထဲက ထပ်မအောင့်လို့ မသောက်ရသေးဘူးခုထိ) ဒီကြားထဲမှာ မတည့်တဲ့အစားအစာတွေ မစားမိအောင်ရှောင်ဖြစ်တယ် energy drink တွေနဲ့ gas ပါတဲ့အချိုရည်တွေ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်တယ်နည်းနည်းသောက်မိရင် ပြန်အောင့်တာနဲ့မကာမိလို့… ပုံလေးတွေပြထားပေးပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး …